Munyori: SkySpirit2011, Alrot, rakapepetwa Enrique Cornejo
Air Force Imwe kudanwa chiratidzo chipi ndege of Air Force of Zimbabwe iri rinova President wenyika United States.
Sezvo 1990, Presidential rengarava chinosanganisira mbiri Boeing 747 zvikuru kukwanisa uye vagadzirise kuitira kuti mutungamiri wenyika uye chikwata chake anogona kufamba flexibly uye zvisina ngozi apo kuramba vachionana rehurumende uye vemauto vatungamiri kuti hapana kuita manheru dambudziko.
FSX Air Force One Boeing 747-8i pamwe yemhando VC kubudikidza Alejandro Rojas Lucena uye VC textures ndiwedzere kubudikidza Enrique Cornejo.
Izvi zvinopa B747 ane payware rakapotsa Cockpit Kutarira uye zvino mitema reganda chirukwa panhivi zvigaro. Kunyange ane mutyairi bhachi akasungirirwa vari necheshure Cockpit. The panel.cfg uye aircraft.cfg vakaungana uye rakapepetwa neDare Flightsim Wekishopu Team.
Zvino unogona mifananidzo inokukurudzira kumusoro "kuzvidhori zvangu" hwindo iri rakapotsa Cockpit kusvika zvinotevera mahwindo nyore: GPS, avionics, mepu, ATC, kukwira / redhiyo altimeter / kuparadza chinja, car-yokuzorora chinja, throttle quadrant, wachi, descentometer, kneeboard uye panhongonya remadziro. A nyaya itsva kuzvidhori zvangu hwindo iri pitot kupisa chinja pamwe nokudzimwa zvinhu (XML geji kubudikidza Enrique Cornejo).
The autopilot pamusoro haizoshandisi vane mwenje izvo kuvaita kutarira sezvazviri chaizvo. Center ATC kuzivikanwa munyika ndege iyi "Boeing 747 Air Force One". Nzvimbo strobe zviedza wagadzirirwa. The Cockpit maonero kubva mutyairi chokutonga zvino vasununguka nokuti kure kuti chigaro Hwakareba. The ndege ine itsva injini maonero VC nechomukati maonero matsva. The mabhureki vane differential mabhureki gadziriro kuti unotedza majana pasi. The Air Force Mumwe unaku chinoshamisa uye Professional textures kubudikidza isingazivikanwi, izvo zvinosanganisira mashoko, chaiyo utsi injini mana, zvakawanda kabhini pfungwa, chaizvoizvo inzwi uye sezvazviri chaizvo usiku VC mwenje fuselage usiku textures.
The aileron parameters yave nani, saka ikozvino vachichinjana vari muchechetere. ndege ino anoshandisa Project Open Sky FSX Boeing B747-800 muenzaniso OSX748V4_GENX (MDL), uye inosanganisira geji hwindo Posky utility kuona pfungwa masitepisi, pasi nhumbi SERVICING, etc. The injini ruzha zviri rakapepetwa kufanana chaidzo vane nzvimbo yemutekenyi ambient. The Flight Management Computer (FMC) wakasimba uye achiratidza kunge payware chiridzwa. The VC inosanganisira FMC, Primary Flight Ratidza (PFD) uye Multi-Rinoshanda Ratidza (MDF) akaratidza ari chaiko. The rakapotsa Cockpit rune Engine-Achiratidza uye Crew-Alerting System ainziwo EICAS, Ground nepedyo Yambiro System (GPWS), kushanda wipers, kabhini zviedza, moto kudzvinyirira, avionics chinja, mafuta crossfeed.
Unogona kuonawo kumhara zviedza haizoshandisi, taxi chiedza chinja, injini emagetsi, apu jenareta, bhatiri chinja, Starter haizoshandisi, de-chando chinja, mukuru zviedza haizoshandisi. Wachi nhamba zvino orange unoita kuti kutarisa nani uye zviri nyore kucherechedzwa. Vakaungana rakapepetwa nokuda FSX kubudikidza Flightsim Wekishopu Akatanga Enrique Cornejo.
Boeing 747-8i Air Force One Package FSX & P3D Download
Downloads: 69 138
Downloads: 127 248
Downloads: 170 207